IINGUBO EZINGAMA-35 ZEBLUE BRIDESMAID ZEZIMBO ZONKE - IFASHONI
Eyona Ifashoni Iingubo ezingama-35 zeBlue Bridesmaid zeZimbo zonke kunye noHlahlo-lwabiwo mali
Iingubo ezingama-35 zeBlue Bridesmaid zeZimbo zonke kunye noHlahlo-lwabiwo mali
Ukusukela ezinzulwini zobusuku ukuya kohlaza okwesibhakabhaka, safumana ezona zitayile zilungileyo kulo mthunzi uthandwayo.
Ukuhlaziywa ngoMeyi 19, 2021 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Kukho isizathu sokuba luhlaza okwesibhakabhaka ngokungaguquguqukiyo yenye ye imibala ethandwayo yomtshato . I-ultra-versatile kunye ne-universal flattering, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka inokusebenzela nayiphi na indawo yomtshato kunye nomxholo. Ke, ukuba ujonga ezinye ukuphefumlelwa umbala womtshato , cinga ukufaka le hue kwizambatho zetheko lomtshato wakho. Izambatho zomtshakazi ohlaza okwesibhakabhaka lukhetho olunokusilela kuyo nayiphi na indlela yomtshato. Ukusuka kohlaza okwesibhakabhaka olunothuli ukuya ekuhlaseleni kwe-navy, kukho umthunzi ngalo lonke ixesha lonyaka. Kodwa ukukhetha iilokhwe zodade ogqibeleleyo eziluhlaza kunokuba yinkohliso (ngakumbi ukuba ucinga ukujonga okungafaniyo ). Ungakhathazeki-siqokelele ilokhwe entle yomtshakazi enxibe isimbo ngasinye kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Ngezantsi, khangela iincwadi zethu eziphezulu ukusuka abathengisi abathandwayo abatshatileyo ukufumana iimbono ezininzi kusuku lwakho olukhulu. Kwaye ukuba kunokwenzeka ufumane ilokhwe enye (okanye ezimbini) yile nto uyikhangelayo, zithenge kwangoko.
ubuhle kunye nomtshato wesilo
Iimpahla ezinxibe u-Dusty Blue Bridesmaid
Izambatho zoMtshakazi oMnyama oLuhlaza
Iingubo zeRoyal Blue Bridesmaid
Iingubo eziluhlaza eziluhlaza
Ukuba ucwangcisa umtshato we-boho, iilokhwe zomtshato eziluhlaza ezinothuli zinobumba basemhlabeni, obunokuthi buzalise umxholo wakho ngaphandle komthungo. Lo mthunzi opholileyo uxubana kakuhle nezinye iithowuni ezithulisiweyo, ke kufanelekile ukuba ufuna iqela lakho lomtshato ngemibala eyahlukeneyo. Okanye, ukuba ucinga ukubonakala kwe-monochrome, iblue eluhlaza enothuli iya kwenza ingxelo emangazayo esibingelelweni. Fumana ezona zingubo zilungileyo zinothuli eziluhlaza apha.
Ewe kuyinyani: iilokhwe ezisezantsi-phezulu ziyabuya kakhulu. Olu luyilo lwe-flirty lune-faux-roll esongelweyo ngaphambili kunye neenkcukacha zethayi ukwenza isilhouette efanelekileyo, evumela abakhonzazana bakho ukuba bajonge ngokungathandabuzekiyo.
IQela eliDessy I-ruffled ephezulu yokugubungela isinxibo esine-strap spaghetti in Mist, $ 242, TheDessyGroup.com
Iimpahla zokutyibilika kwentamo yeCowl zezi Ukulawula iindlela zokubaleka zomtshato . Ugqibelele ngomtshato waselwandle okanye umsitho kwindawo eneswanky, le midi encinci yenye yeqela labasebenzi bakho elinokukunandipha ukunxiba.
Sachin kunye neBabi Isinxibo seCali satin midi eLwandle, $ 168, BHLDN.com
Mhlawumbi ufuna iintombi zakho ezikwisiketi esinye esineentambo ezahlukeneyo. Ukuba kunjalo, le lokhwe ibhetyebhetye inezinto ezininzi onokukhetha kuzo. I-airy, imikhono ejijekileyo inokunxitywa ngaphezulu okanye phantsi kweengalo ngeendlela ezintathu. Nokuba bayinxiba kanjani le lokhwe yomtshakazi eluhlaza enothuli, lukhetho oluhle oluya kuvela.
Ngwevu yeGrey Ingubo kaJane ejikajika ngengubo e-Dusty Blue, $ 99, Intaka yeGrey.com
Ngesiketi esiphakamileyo kunye nesiketi se-chiffon, le ilokhwe yentsimbi ilokhwe iluhlaza ayithandani. Ngaphezulu, iqhina lesinqe lide ngakumbi ukuba lenze isithunzi esinyanisiweyo.
Ndibonise uMumu wakho Isinxibo seLiz maxi kwi-Blue Blue, $ 168, ShowMeYourMumu.com
Isinxibo sokwamkelwa komtshato kaMeghan Markle kunye nale ngubo yekhola ephezulu yentamo. Uyilo olungqindilili lubandakanya isiketi esikhululweyo kunye neslit ephezulu (kwaye ineepokotho).
UKennedy Blue Isinxibo somtshakazi kaStassi kwiSlate Blue, $ 119, KennedyBlue.com
Ukujonga ngokundilisekileyo, qaphela le Jenny Packham midi. Isinxibo somtshakazi esiluhlaza esiluhlaza sinemikhono ye-flutter kunye nokunqunyulwa kwe-keyhole kwi-bodice. Isinqe esinebhanti sikhokelela kwisangqa se-midi isiketi esilungele ukudanisa.
UJenny Packham Isambatho se-flutter esikhombisayo se-bodice midi enxibe i-Windsor Blue, $ 248, TheDessyGroup.com
Siziva ngathi 'izicakakazi zakho azisokuze zifune ukukhulula le gown intle. Ngemikhono ebandayo egxalabeni egadiweyo kunye ne-V-neckline bodice ecekeceke, le ngubo yomtshakazi oluhlaza okwesibhakabhaka lukhetho oluhle.
Uphumelele Ulahlekelwe yingubo ebandayo yamagxalaba ebusika eSlate Blue, $ 89, Lulus.com
Nika iqela lakho lomtshato uninzi lwezinto onokukhetha kuzo kunye nale ngubo yomtshakazi eguqukayo enothuli. Iza kunye nemisinga emibini engaphezulu emide eqhotyoshelwe esinqeni, ke ukhetho lwe-neckline phantse alupheli. Izicakakazi zakho zinokwenza iindidi ngeendidi zokubonakala ukusuka kungabinamtya ukuya egxalabeni elibandayo, igxalaba elinye, okanye nentamo ejijekileyo ephezulu. Ukuba ujonge ukutyala imali kwigawuni ekwenza konke oku, cinga ngale.
Ngwevu yeGrey Isinxibo esiguqukayo se-chiffon kwi-Dusty Blue, $ 99, Intaka yeGrey.com
Ukukhangela ieleyisi? Isinxibo esisegxeni esine-maxi sinemodeli entsonkothileyo yeelace kwi-bodice, eyahlukaniswa nesiketi se-chiffon evulekileyo.
UKennedy Blue Isinxibo somtshakazi kaSutton kwiNkungu, $ 139, KennedyBlue.com
Le lokhwe yomtshakazi iluthuli iluhlaza imalunga nomqolo. Ukusuka ngaphambili, le ilokhwe ilula yomyeni ka-chiffon enemikhono ye-flutter-kodwa umbono ongasemva ubonakalisa izinto ezibonakalayo ezibotshwe kwisaphetha sesiphelo esithandwayo.
Azazie Isinxibo somtshakazi uEverett e-Dusty Blue, $ 79, Azazie.com
Ngaba ufuna iilokhwe zomtshakazi eziluhlaza eziphakamayo kunye ne-glam? Umkhosi wamanzi kunokuba ngumthunzi wakho. Ukunceda unciphise ukukhangela kwakho, khangela iincwadi zethu zokunxiba eziluhlaza okwesibhakabhaka.
Imikhono kaBhishophu zizoba kuyo yonke indawo kulo nyaka-ngakumbi kwimitshato. Nxiba amakhobokazana akho kule silhouette ye-bohemian ukubonisa ukuba linyathelo elinye phambi kwendlela. Olu khetho lunezinto ezisikiweyo ezisemacaleni ezikhokelela kumqolo ovulekileyo, kunye neenkcukacha ezirhabaxa ecaleni kwesinqe kunye nentamo yokuntywila.
IQela eliDessy U-Harlow ubhishophu onxibe isinxibo se-chiffon sokunqunqa maxi ezinzulwini zobusuku, $ 236, TheDessyGroup.com
Iimpahla zakho zomtshakazi akufuneki zigqibe xa ingeyohlobo lwakho lomtshato. Gcina kulula kwi-maxi elula. Le ine-neckline esikiweyo ethe nkqo kunye neqhina lesaphetha ngasemva.
Iholo lomtshato izimvo zokunxiba
Ndibonise uMumu wakho Isinxibo se-Lauren tie maxi kwi-Rich Navy, $ 188, ShowMeYourMumu.com
Musa ukuwajongela phantsi amandla okusika okunencasa. Le lokhwe kamolokazana ilonwabisayo ilokhwe inentanda yesithandwa, imitya eshinyeneyo kunye nokucenga okusikayo. Ukucinywa okuncinci kubekwe nje phantsi kwebust ukukhulisa isinqe.
Ngwevu yeGrey Isambatho se-Elyse kwigophe, $ 99, Intaka yeGrey.com
Ukukhangela umtshato wasebusika? Yiya kujongwa ivelvet. Le maxi ye-luxe ende enemikhono enentambo yokuntywila enzulu kwaye ivulelekile kumdlalo weqonga ophezulu.
UJenny Yoo Isinxibo se-Ryland velvet maxi kwi-French Blue Velvet, $ 295, BHLDN.com
Ukuba umtshato wakho uphakathi kwamaxesha onyaka, jonga isiketi esisezantsi esisezantsi. Le lokhwe inemizobo esonga i-faux-wrap bodice kunye nemitya elula yespaghetti.
DB Studio I-bodice spaghetti strap satin tulip dress in Marine, $ 100, Ngobubele.com
Umtshato ophakamileyo ufuna iilokhwe ezibhinqileyo, kwaye lo uyakulingana nomthetho osayilwayo. Ngomqala osikiweyo ongenamtya kunye nesiketi esakhiweyo, oku kujongeka kuyimbalasane yobuhle.
IQela eliDessy ingubo engenamtya engenamtya ongenawo umtya phambi komzuzwana wobusuku, $ 244, TheDessyGroup.com
Awungekhe uhambe gwenxa ngentamo yesithandwa esingenamtya. Isinxibo somtshakazi esinexesha elingenamikhono esiluhlaza siye sathambisa ilaphu entanyeni kunye nobukhosi obufanelekileyo obunqeni obungena kwisiketi sempepho epholileyo.
Uphumelele Amagqabantshintshi enu enxibe impahla ye-maxi engenazintambo kwi-Navy Blue, $ 95, Lulus.com
Nantsi ilokhwe yempelesi baya kufuna ukuyinxiba kwakhona. I-frock ye-navy ine-neckline ephezulu ye-neckline kunye nesiketi esilula sobude bomgangatho. Olu silhouette luhlaza lubonisa ukuba kuncinci kunokuba ngaphezulu.
Sachin kunye neBabi Isinxibo se-Beckett satin kwi-Navy, $ 220, BHLDN.com
ndiyawathanda amantombazana am
Ukuze ufumane into engaqhelekanga, cinga ngesinxibo somtshakazi. Olu khetho lwe-navy luhlaza lunee-straps ezinokuhlengahlengiswa kunye nengubo ye-midi eguquguqukayo ngokwaneleyo ukuba isebenze kulo naliphi na ixesha lonyaka.
IQela eliDessy Isinxibo se-bustier crepe midi esinemitya esaphetha ezinzulwini zobusuku, $ 231, TheDessyGroup.com
Izambatho ezingaphandle kwegxala zilungile kwimixholo yomtshato ehlekisayo. Siyayithanda i-twist-front kunye neenkcukacha zephaneli ezikule bodice yegown. Inemitya yespaghetti yokubonelela ngenkxaso eyongezelelweyo.
Azazie Isinxibo seentombi zikaMillie kuMnyama oMnyama, $ 109, Azazie.com
Ewe ukhona umahluko phakathi kwe-navy blue kunye ne-royal blue. Iingubo zasebukhosini eziluhlaza okwesibhakabhaka zihlala zikhanya kunemikhosi yaselwandle ilitye lesafire . Kwaye, unikwe igama layo, umbala unika i-regal vibes (egqibeleleyo kubalandeli bakaPrincess Diana). Siqokelele eyona ilokhwe ilungileyo yasebukhosini ilokhwe apha.
Kukho into ekhethekileyo malunga nelokhwe ephezulu yasebukhosini enxibe ilokhwe, ebeka ukujija kwanamhlanje kwintamo yesiko le-halter. I-bodice ikwanomnqamlezo onqamlezileyo we-criss esinqeni ukujonga ukusikwa okuncomekayo.
Umtshakazi kaDavid Isinxibo esitshatileyo esine-high-neck dress enesiketi esigcweleyo eHorizon, $ 150, Ngobubele.com
Ngaba sinokuthi sisinxibo onokuthi ufune ukusizela ngokwakho? Ngentamo ejijayo kunye nomqolo ovulekileyo, le ilokhwe ilungiselela umakoti oluhlaza okwesibhakabhaka lukhetho oluhle.
Uphumelele Ukunxitywa kwe-maxi yaseHome yaseZulwini kwiRoyal Blue, $ 84, Lulus.com
Sithanda ngokukhethekileyo isitshixo esisikiweyo ngasemva kule lokhwe yomtshakazi ilokhwe, elinganisa intamo ephezulu ngaphambili.
UKennedy Blue Isinxibo sakwaMilly esitshatileyo eSapphire, $ 119, KennedyBlue.com
Ukuba ujonga ilokhwe eluhlaza yomtshakazi, uya kuyithanda le maxi ingenamqolo. Iiruffles ezithambileyo ezijikeleze intamo zongeza uthsaba lokonwaba koku kuyilwa okungaqhelekanga.
IQela eliDessy Isinxibo se-britt ruffle-trimmed backless kwi-Classic Blue, $ 122, TheDessyGroup.com
Asinako ukususa amehlo ethu ngasemva kule lokhwe yasebukhosini ilokhwe, enesinqumle esinqunyiwe ngasemva kwe-lace bodice. Ukuba uthenga into eyahlukileyo, oku kuya kunceda 'izicakakazi zakho zivele.
UKennedy Blue Isinxibo somtshakazi kaDevin eSapphire, $ 149, KennedyBlue.com
Ukuqhawulwa okungasemva kweBold okwenziwe maxesha kule mihla njengesiqhelo se-chiffon frock. Ngesaphetha ngasemva kunye nentombazana enesithandwa, le ngubo yethoni yegolide iyathandana kwaye iyonwabisa.
Azazie Ingubo kaJulie yomtshakazi eRoyal Blue, $ 79, Azazie.com
Mhlawumbi uthenga into encinci engalindelekanga. Ukuba ufuna iqela lakho lizimele ngombala ongaqhelekanga wendalo, zininzi izinto onokukhetha kuzo. Ukusuka kwi-ice blue ukuya kwi-cornflower, khangela le ngubo iluhlaza okwesibhakabhaka ukuze uphefumlelwe.
Yiya ngesibindi ngombala oqaqambileyo oluhlaza egxeni elinye. Olu khetho lunebhande elihle le-crisscross ye-waistband ye-uber-flattering silhouette.
Umtshakazi kaDavid Isinxibo somtshakazi egxeni elinye kunye nesiketi esigcweleyo kwi-Ice Blue, $ 150, Ngobubele.com
Ukumkanikazi weqhwa uyangcangcazela? Ewe Nceda. Isinxibo se-satin se-bardot esisongelayo sinobuqaqawuli obunokubakho. Nge-neckline ye-neckline kunye ne-slit ephezulu, 'iintombi zakho ziya kujonga zihle kakhulu kwaye zime ecaleni kwakho.
IMBONO YASOS I-satin bardot isongele isinxibo se-maxi kwi-Ice Blue, $ 151, ASOS.com
Umtya onqwenelekayo weentambo zokubopha umnxeba unika eli xilongo ingubo yobufazi. Ngomqolo ovulekileyo kunye notyando oluphezulu kwisiketi sokwakheka, iintombi zakho eziza kutshata ziya kuqaqamba ngale ndlela.
IQela eliDessy isinxibo sexilongo esineqhina esicaba eqengqiwe ngaphambili eLarkspur, $ 242, TheDessyGroup.com
Le lokhwe yomlobokazi ilokhwe eluhlaza okwesibhakabhaka iyonwabisa, vibes yolutsha ngenxa yemitya eqholiweyo kunye ne-smocked elastic back. Ubukhosi besinqe sobukhosi buhlangatyezwe ngesiketi esigcweleyo, esiya kuthi simthande abakhonzazana bakho.
Ndibonise uMumu wakho Isinxibo maxi sikaJuni kwi-Icy Blue, $ 198, ShowMeYourMumu.com
awona magama aqhelekileyo kuthi
Awuyi kuba nangxaki ekuyileni le ilokhwe ilula ye-chiffon maxi. Umphezulu okhululekileyo, onjenge-blouse wongeza ubume obuthambileyo kwisiketi esincinci.
UKennedy Blue Isinxibo somtshakazi kaLauren kwiCornflower, $ 109, KennedyBlue.com
Isinxibo esilula somtshakazi esineblue sine-halter neckline yanamhlanje, ehleli ngaphezulu kwe-bodice ye-princess-seamed enesitshixo seziko. Isinqe esinebhanti ephezulu yehlela kwisiketi esigcweleyo somgca we-A esenzelwe ukujija.
Uphumelele I-Ode ukuya kwi-Romance enxibe iimpahla ezingenamikhono kwi-Slate Blue, $ 89, Lulus.com
Abo bathenga into enesibindi kunye nokuqaqamba banokukhetha lo mthunzi uluhlaza. Ngomkhonto omfutshane, ohambayo kunye nemikhono ye-flutter, le ngubo yomtshakazi eluhlaza ilungele imitshato yasehlotyeni.
Umtshakazi kaDavid Umkhono we-flutter sleeve chiffon onxibe mfazi omncinci eMalibu, $ 120, Ngobubele.com
Ukuba unengxaki yokuthatha isigqibo ngenkangeleko, zama into yakudala. Le ilokhwe i-V-intombazana ilokhwe eluhlaza okwesibhakabhaka ilokhwe ethozisayo kwindalo yonke eya kusebenza phantse kuyo nayiphi na indawo. (Iipokotho ziyibhonasi eyongeziweyo.)
UKennedy Blue Isinxibo sikaLydia somtshakazi eSky, $ 119, KennedyBlue.com
Ayisiyiyo kuphela isibhakabhaka esiluhlaza egxeni lomtshakazi onxibe umoya kwaye ebukeka, lukhetho olufanelekileyo kubafazi bakho. Ngaba sifuna ukuthetha ngaphezulu?
Azazie Ukumangalela isinxibo somtshakazi kwi-Sky Blue, $ 69, Azazie.com
umtshato wesintu ohlawula ntoni
umva phantsi kwebhedi
Ixabiso eliqhelekileyo lemitshato yokufikela
amakhonkco omtshato apholileyo emadodeni